को-को कलाकार मूर्ख बने, क–कसले बनाए ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
को-को कलाकार मूर्ख बने, क–कसले बनाए ?
आज अप्रिल १ अर्थात् विश्व मूर्ख दिवस । यो दिन विश्वभरका मानिसहरू साथीभाई तथा इष्टमित्रलाई झुक्याउँदै मूर्ख बनाउने चलन छ । अरुलाई मूर्ख बनाएर दुःख दिने, आफूले आनन्द लिने यो दिन कतिपय मानिसले निको मान्दैनन् । तैपनि रमाइलो मान्दै एकअर्कालाई झुक्याउने र मूर्ख बनाउने चलन नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत झुक्याउने चलन बढेको छ । नेपालमा आजकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको र लकडाउन हुने भन्ने पुराना समाचारका लिंक सेयर गर्दै धेरैलाई झुक्याउने प्रयास भयो ।
आज विशेषगरी नेपाली कलाकारहरू को–को मूर्ख बने र क–कसले अरुलाई मूर्ख बनाए ? उनीहरूको भनाई जस्ताको त्यस्तै –
दिनेश काफ्ले, हास्य कलाकार
म आज मज्जैले मूर्ख बनें । एकजना केटी साथीले मेसेन्जरमा एउटा कुरा भनौं भनिन् । मैले भन न भनें । उनले त सिधै म त गर्भवती भएँछु के गर्ने होला भनिन् । अनि मैले जोबाट गर्भवती भएको हो, उसैलाई भन्ने, मलाई किन भनेको त ? भनेँ । उसले त तपाईंमाथि नै शंका लागेको छ पो भन्न थालिन् । त्यसपछि मेरो सात्तो गयो । होइन, तिमीले भेटघाट नै नभई यस्तो कुरा गर्दैछेउ । मलाई फँसाउन पो खोजेकी हौ कि क्या हो भनें । अनिमात्र उनले अप्रिल फुल भनिन् । तर, मलाई आज अप्रिल फस्र्ट भन्ने थाहा थिएन । मैले पनि जिस्किँदै लौ ठीकै छ त मेरी गर्लफ्रेन्ड पनि गर्भवती भएकी छिन्, तिमी भइछौ, एकैपटक दुई सन्तानको बाउ बन्न पाइने भैयो भन्दिएँ । उनले ल बधाई छ मैले त अप्रिल फुल मनाएको हुँ । तपाईंको त रियल होला भनिन् । मैले पनि अप्रिल फुल नै मनाएको हो भनिदिएँ । यसरी दोहोरो अप्रिल फुल बनाइयो ।
आज अरुले चाहिँ मलाई मूर्ख बनाउन सकेनन् । बुढीले बनाइन् । उनले रेडियो अडियोमा सन्चो बिसन्चो कार्यक्रम चलाउँछिन् । त्यहाँ १० मिनेटका लागि जाउँ भनेर लगिन् । तर, २ घन्टा कुराइन् । त्यसरी कुर्नुपर्दा कहिलेकाहिँ बुढीबाट पनि मूर्ख बन्ने दिन आउँदो रहेछ भन्ने लाग्यो ।
मेरो एकदमै नजिकको साथी तर नाम भन्दिनँ । उहाँलाई फोन गरेर तिम्रो र मेरो सम्बन्ध आजबाट सकियो भनेँ । त्यसपछि उहाँले निरन्तर फोन गरिराख्नुभयो । २ पटक त रिसिभ गरिनँ । तेस्रो पटक फोन रिसिभ गरेँ । एकछिन त्यही पारामा कुरा गरेंँ । उहाँ निकै आत्तिएको जस्तो लाग्यो । अनि, अप्रिल फुल भनेँ । त्यसपछि उहाँ पनि हाँस्न थाल्नुभयो, लडिबुडि हाँस्न थाल्यौं ।
आज मैले तीनजनालाई मूर्ख बनाएँ । एकजना साथीलाई हिजो राती १२ बजे फोन गरेर ठमेल घुमाइदिएँ । म चाहिँ घरमा सुतिरहेको थिएँ । त्यति नै बेला एकजना साथीसँग दोहोरी साँझ डुल्ने योजना बनाएँ । उसलाई ठमेल बोलाएँ । उ लैनचौरमा बस्थ्यो । त्यहाँबाट ठमेल आएर फोन गर्यो । तैंले ढिला गरिस् म त जमल आइपुगेँ भन्दै त्यहाँबाट जमल बोलाएँ । फेरि जमल आएर फोन गर्यो । म यता दरबारमार्गको शालिकमा छु भनें । उ त्यहीँ पुग्यो मलाई देखेन फोन गर्यो । म ठमेल छिर्ने गेटमा पुगेँ, त्यहाँ आइजो भनें । विचरा त्यहाँसम्म गएपछि ह्याप्पी अप्रिल फुल अब घर गएर सुत् भन्दिएँ । साथी मज्जाले रिसाएको छ । यस्तै, दिउँसो बालाजुमा कार्यक्रम थियो । त्यहाँ एकजना साथीलाई म तेरो घर नजिकै आएको छु आइजो भनें । उ हतारिँदै त्यहाँ आएर फोन गर्यो । म पुलमा छु भनें । त्यहीँ आयो । त्यहाँ आइसकेपछि ह्याप्पी अप्रिल फुल भनेर घर फर्काइदिएँ ।
बिहानै मलाई चलचित्र कृष्णलीलाका निर्देशक दीपक ओलीले मूर्ख बनाउनुभयो । नयाँ वर्षको दिनबाट चल्ने भनिएको कृष्णलीला कोभिड–१९ को कारण तत्कालै प्रदर्शनमा नआउने भन्ने कुरा थियो । तर, एक्कासी उहाँले बिहान अब बैशाख १ गते नै फिल्म चल्ने भयो, अब पब्लिसिटीका लागि हिँड्नुपर्छ, तयार हुनुहोला भन्दै म्यासेज पठाउनुभयो । मलाई त झनक्क रिस उठ्यो । तत्कालै फोन गरेर यतिबेला आएर के को पब्लिसिटी भन्दै रिसाएँ, त्यसपछि हाँस्दै आज अप्रिल फूल भन्नुभयो ।
अर्जुन पोखरेल, सङ्गीतकार
आज एकजना साथीले म्यासेन्जरमा मान्छेलाई मूर्ख बनाउने १० तरिका त्यसमा पनि ५ नम्बरको गज्जब रैछ भन्दै पठाउनुभयो । के रहेछ त भनेर खोल्दा त्यो त भिडियोको स्क्रिन सटमात्र पो रहेछ ।
आज काममा व्यस्त भएर पनि होला, मूर्ख बन्न र बनाउन पनि भ्याइएको छैन । तर, पछिल्लो समय मानिसहरूलाई अप्रिल फस्टको बारेमा थाहा भएको हुँदा मूर्ख बनाउन सहज त छैन । धेरै पहिला चाहिँ मैले मरो आमालाई आजकै दिन मूर्ख बनाएकी थिएँ । त्यो दिन घर फर्कने बेलामा खुट्टा खोच्याएर रुँदै घरभित्र छिरें । अनि आमाले आत्तिँदै के भन्नुभयो । झन् रुँदै लडेर खुट्टा भाँचियो भनेँ । त्यसपछि आमाले अस्पताल लैजानका लागि रिक्सा पनि तयार गर्नुभयो । आमाको आँखामा आँसु टिलपिल देखेपछि हाँस्दै अप्रिल फुल भन्दै खितिति…हाँस्न थालें । आमा त रिसाएर अब चाहिँ तेरो खुट्टा भाँच्छु भन्दै पिट्न थाल्नुभयो ।
आज त छैन । तर, केही वर्ष पहिला मेरो एकजना साथी विजयलाई अर्को साथी बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ छिटो आउनुपर्छ भनेर बोलाएँ । त्यो साथी कीर्तिपुरबाट हतार–हतार टिचिङ अस्पताल आइपुगेछ । उसले टिचिङमा आएर फोन गरेपछि आज अप्रिल फुल भन्दिएँ । त्यसपछि घरमा बोलाएर सँगै खाना खाएर छुट्टिएका थियौं । त्यसयता भने कसैलाई मूर्ख बनाएको छैन ।
म केही दिन अघि चितवन आएको थिएँ । भोलि काठमाडौं आउने तयारीमा छु । तर, एकजना साथीले भोलिबाट लकडाउन, कसरी काठमाडौं जान्छौं भन्दै समाचारको लिंक पनि पठाइन् । मेरो भोलि जसरी पनि काठमाडौं जानुपर्ने काम भएकाले एकछिन त तनाव भयो । अनि त्यो समाचार अप्रिल फुल भनिन् । उसले मलाई पुरानो समाचारको लिंक पठाएको रहेछ ।